ulaşımparkသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယဆုံးရှုံးသောသူနိုင်ငံသားများထံမှ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[19 / 08 / 2019] TCDD3ကြမ်းပြင်နယူးရုံးအဆောက်အအုံ	41 Kocaeli
[19 / 08 / 2019] Vangölü Express ကို Shuttle နာရီနှင့်ရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ	06 တူရကီ
[19 / 08 / 2019] BAŞKENTRAYထဲမှာအခမဲ့ Enigma	06 တူရကီ
[19 / 08 / 2019] အတ္တကနေစွယ်စုံသင်တန်းဝန်ထမ်းရေးရာ	06 တူရကီ
[19 / 08 / 2019] Denizli ဒေသ660 သီးခြားနယူးဘတ်စ်ကားလိုင်း	20 Denizli
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 Kocaeliulaşımparkသင့်ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယနိုင်ငံသားများဆုံးရှုံးထံမှ
14 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
ပေါ်လာတာဟာအရင်, ဘတ်စ်ကားနှင့်အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်ထဲမှာမေ့လျော့ဥစ္စာများ၏ပိုင်ရှင်များအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေသဖြင့် operated Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ulaşımpark Inc ကိုလက်အောက်ခံ။ ၎င်းတို့၏ဥစ္စာဆုံးရှုံးခဲ့ရသူနိုင်ငံသားတွေကိုစောင့်ဆိုင်း Tram, ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ulaşımparkထိန်းသိမ်းရန်အထူးဗီဒိုထဲမှာ Terminal ကို ID ကို, ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်, ကျောင်းသားကဒ်, နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်ပိုက်ဆံအိတ်မေ့လျော့။ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုအနေဖြင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပစ္စည်းများ 0262 325 23 05 နှင့် www.ulasimpark.com.t ဖြစ်ပါသည် သင်တို့သည်လည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက် form မှာဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်များအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေ Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်အတွင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်မေ့လျော့ဥစ္စာအတွက် operating နိုင်ငံသားများကulaşımpark။ အမှုအရာပျောက်ဆုံးသွား, ulaşımparkဌာနချုပ်, Plajyolu ကြောင့် Gebze နှင့်ပင်လယ်ကွေ့ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာသိုထားလျက်ရှိသည်။ သူတို့နိုင်ငံသားများ '' ပျောက်ပိုင်ဆိုင်မှုစုံစမ်းရေးကော်မရှင် '' system ကိုမေ့ပစ္စည်းများကိုရန်လွယ်ကူ access ကိုလည်းulaşımparkထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်သေချာဖို့, သူဆုံးရှုံးခဲ့ရပိုင်ဆိုင်မှု form မှာဖြည့်ဖို့လိုလားကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အရှင်ကိုအပ်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုယူလာသောလူမှတ်တမ်းတင်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းများကိုမေးလျှင်မခံရမီမိနစ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေကိုမှပလီကေးရှင်းများအပြင်တစ်ဦးအရေအတွက်ကို။ ဥပမာ, သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာထီး (ပုံစံ) ၏မေ့လျော့ခြင်း, အရောင်ဘယ်လောက်ပိုက်ဆံဖြစ်ပါသည်, သူကပိုင်ဆိုင်ခြင်းရှိမရှိသက်သေပြဖို့တောင်းခံနေရသည့်အိတ်သို့မဟုတ်ပိုက်ဆံအိတ်တောင်းခံပျောက်နှင့်လူတစ်ဦး၏ဥစ်စာမြားတှငျတှေ့တှငျတှေ့အဘယ်အရာကိုတောင်းဆိုနေတာ။ သငျသညျနောက်တစ်နေ့အဆင့်တွင်သက်သေပြ, ကိုယ်ပိုင်အဝတ်, ကိုအပ်ခံရပုံစံများထုတ်ပြည့်စေတော်မူ၏။
ulaşımparkပိုင်ဆိုင်သောသို့မဟုတ် Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင်တစ်ဦးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ရှိသည်သို့မဟုတ်လျှင်, သင်ပထမဦးဆုံး 0262 325 23 05 ဥစ္စာမေ့ www.ulasimpark.com.t ဖြစ်ပါသည် သင်ကလိပ်စာမှာပုံစံမေးခွန်းထုတ်နိုင်ပါတယ်။ Kocaeli ၏ပြည်နယ်မှာပျောက်ဆုံးအချက်တွေကိုအချို့ကို Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲဌာနသမ္မတအတွက်ထားရှိမည်လျက်ရှိသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖုန်းနံပါတ်မေးခွန်းထုတ်နိုင်ပါတယ် 153 နှင့် 0262 331 65 89 အောက်မှာကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
Inc ကိုulaşımpark နိုင်ငံသားများဟက်ကမ္ဘာ့ဖလားအတူသဘောတူညီမှုရ 250 14 / 02 / 2019 affiliates ထံမှ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Co. , နိုင်ငံသားများ Sabiha Gokcen လေဆိပ်နှင့်အတူ 250 လိုင်းကယ်တင်တတ်၏, လုံခြုံအဆင်ပြေခြင်းနှင့်အချိန်မီဖြစ်ပါတယ်ulaşımpark။ နိုင်ငံသားများအားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးulaşımparkနှင့်အစ္စတန်ဘူလ် Sabiha Gokcen စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်သားကောင်အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်အစားထိုးမော်တော်ယာဉ်များမဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်။ Kocaeli အများပြည်သူလိုင်းတစ်ချိုး 250 အချိန်မရှိဘဲဆက်လက်အားဖြင့်ပြင်းထန်သောအကျိုးစီးပွားနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဘတ်ဂျက်, သက်သာခြင်းနှင့်-TIME ulaşımparkကြောင့်လည်းလက်မှတ်ဆိုင်များတွင် Sabiha Gokcen လေဆိပ်ပေါ်တဲ့နေရာအတွက်နိုင်ငံသားများမှန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်း။ အချိန် 250 အခြားလေဆိပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးနှုန်းသက်သာခြင်းနှင့်အဆင်ပြေနှစ်ဦးစလုံးကြောင်းလိုင်း,9TL ကျောင်းသားများကိုလေဆိပ်မှကယ်တင်တတ်၏။ ဘတ်စ်ကား၏ 15TL အပြည့်အဝတာဝန်ခံ ...
သင်ယာဉ်များအတွက်လွဲချော်ကွောငျးတှေ့မယ်လို့ဘယ်လိုအစ္စတန်ဘူလ်အတွက် items 01 / 03 / 2016 , အစ္စတန်ဘူလ်, metrobus အတွက်ဘတ်စ်ကားကိုရပ်တန့်နှင့်, သင်ဘူတာရုံ၌သင်တို့၏ဥစ္စာကိုဆုံးရှုံးခြေရာခံဖို့နည်းလမ်းရှာတွေ့နိုင်ဖို့ဘယ်လိုသိသင်ရှာတွေ့ဘယ်လိုမေ့သွားပစ္စည်းများအပေါ်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်မော်တော်ယာဉ်များ? IETT ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုအဆောက်အဦးတွင်တည်ရှိသည်အထွေထွေညွှန်ကြားမှု Metrobus, ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များနှင့်ဘူတာမှပိုင်ဆိုင်နှင့်အာဏာပိုင်များ, 26 အဆိုပါပျောက်ဆုံးသွားသောနှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ထားရန်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်နှင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏စနစ်တွင်မှတ်ပုံတင်သည့်depolanmaktadır.kayıpကုန်ပစ္စည်းများပုံစံဖြည့်စွက်အားဖြင့်အကြောင်းကြားစာရှိပါက Karakoy ကုန်စည်ရုံးထဲမှာတာမျိုးကွဲပြားခြားနားသောနေရာပစ္စည်းများ Software များတွေ့ပါပြီ ကုန်ပစ္စည်းများမေးမြန်းနေဖန်ဆင်းတော်နှင့်သင်ဖို့မတုံ့ပြန်ချက်ရှိသေး၏။ အဆိုပါတောင်းဆိုချက်သည်တစ်နေ့လျှင် 30 တစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်အချိန်ရဲ့အဆုံးမှာသင်တို့ဆီသို့ဆက်သွယ်ထားသည်။ ဆုံးရှုံးသွားသော istanbulkart စိတ်တော် ...
Kadikoy-Kartal မက်ထရိုဖွင့်ပွဲ၏ 19 ။ နိုင်ငံသားများနေ့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါသည် 05 / 09 / 2012 drop-မိနစ် 32, 22 ကီလိုမီတာပင်နံနက်ယံ၌အလုပ်လုပ်ရန်သွားပြင်းထန်မှု၌ထိုင်ဖို့နေရာရှာတွေ့မှပင်တတ်နိုင် 16 ဘူတာမှ Kadikoy-Kartal ။ တစ်ဦးကတိတ်ဆိတ်အေးချမ်းသင်ဥရောပဘက်ခြမ်းနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်သောအခါ, Kadikoy-Kartal မက်ထရိုလိုင်းအတွက်ရေပန်းစား overcrowded ။ နှစ်သိမ့်အတွက်ကြောင့်အကွာဟချက်၏ဖွင့်ပေးထားမယ့်သူကို Wagon မိန်းမငယ်, အငြိမ့်ခရီးတစ်လျှောက်လုံးအိပ်ပျော်နေသောလူများစွာကိုဖြတ်ပြီးလာရန်စာအုပ်များနှင့်သတင်းစာများနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှကိုဖတ်အထိပါပဲ။ နိုင်ငံသားများမြေအောက်ရထား, သန့်ရှင်းလှပသောမြန်ဆန်ကြောင်းသဘောတူသည်။ မက်ထရိုအတွက်အကြီးမားဆုံးပြဿနာခရီးသည်များကထုတ်ဖော်ပြောဆိုဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အကြောင်းကိုစကားပြောကြုံတွေ့အခက်အခဲများရောက်ရှိဖို့ရပ်လိုက်နိုင်သည်။ အထွေထွေအဆိုပါနိုင်ငံသားသတင်းထောက်မက်ထရို, ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်မီနီဘတ်စ်ရောက်ရှိဖို့အမိမြေလက်စွပ်ပြောခဲ့တဲ့တောင်းဆို ...
Gebze အစ္စတန်ဘူလ်ulaşımparkထံမှလွယ်ကူစွာ Access ကိုမှလျှို့ဝှက်ချက် 19 / 07 / 2019 အစ္စတန်ဘူလ်အကြားတံတားအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် - Inc ကို Gebze, Kocaeli, တူရကီulaşımpark Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် affiliates ကားဂိုဒေါင်။ ကားဂိုဒေါင်, လုံခြုံအဆင်ပြေနှင့်သူတို့အပြည့်အဝအချိန်သွားချင်ဘယ်မှာမှကယ်တင်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေနှစ်ခုပြည်နယ်များ, Gebze, Çayırova, Darica နှင့် Dilovasi ၏နယ်စပ်တွင်တည်ရှိသည်။ Gebze ရဲ့ဘတ်စ်ကားပိုမြန်ဒီဘတ်စ်ကားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဦးတည်ရာမှတစ်နေ့ကိုပျမ်းမျှ 103 နှင့် 22 တထောင်ခရီးသည်မှာကားဂိုဒေါင်, အငြိမ့်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာရောက်ရှိလာသော။ Kocaeli နယ်နိမိတ်အတွင်းတည်ရှိသော Marmaray ဘူတာရုံအားလုံးကိုဘတ်စ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုနိုင်ငံသားများလည်းအစ္စတန်ဘူလ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရိုးရှင်းစွာရှိပါသည်။ ပျမ်းမျှနေ့စဉ် 22 THOUSAND ခရီးသည်နိုင်ငံသားများulaşımparkသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများကြောင့် Kocaeli အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခရိုင်အတွင်းရှိကြောင်းနားလည်မှု '' ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုအာရုံစူးစိုက် '' ...
TCDD Atatürkရဲ့ဥစ်စာပွနျလညျထူထောငျကယ်တင် 18 / 05 / 2012 တူရကီရထားဘူတာအဆောက်အအုံအိမ်ရာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်အတွက်ကရိယာအတွက်တပ်မတော်ဂရိတ်ခေါင်းဆောင်Atatürkနှင့်အမျိုးသားအခက်အခဲအကျပ်အတည်းများကဌာနချုပ်, တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) နှင့် Gazi တက္ကသိုလ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူပွနျလညျထူထောငျလျက်ရှိသည်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဌာနချုပ်နှင့်အိုးအိမ်များတွင်တပ်မှူးအဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ 1892 အတွက်တူရကီအတွက် Ataturk 27 ဆိုက်ရောက်အရေးကြီးဆုံး 1919-1920 နှစ်အကြားယူရေရှည်အမိန့်မှခွဲဝေထားပြီးကတည်းကယခင်က 1922 '' စတီယာရင်အဆောက်အဦး 'တှငျကငျြးပခဲ့ရထားလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေးစဉ်အတွင်းဘဂ္ဂဒက် သူပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပဆုံးဖြတ်ချက်မှသက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။ သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားနှင့်အတူ 1921 ပြင်သစ်အင်တာဗျူးတွေမှာတော့ပါလီမန်၏အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာနှင့်ကလေးရဲ့နေ့ 23 ဧပြီလတည်ထောင်ခြင်းများအတွက်အစည်းအဝေး၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအဖြစ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ...
ရထားလမ်းစနစ်များနည်းပညာသင်တန်းမှတ်စုများ: သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အထူးပစ္စည်းများ၏ရှင်းလင်းခြင်း 14 / 07 / 2012 module ကုဒ်: 840UH0014 module အမည်: ပုဂ္ဂလိကကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် gauge ဖော်ပြချက်: အဆိုပါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတိုင်းတာအားဖြင့်ဒီ module (ပုဂ္ဂလိက IADL) ၏ထောက်ပံ့ရေးဧဒင်eģya၏စိန်ခေါ်မှုများကိုသယ်ဆောင်ရှင်းလင်းမိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ပါဘူးတဲ့သင်ယူမှုပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
Mass သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထံမှ IETT မေ့လျော့ပစ္စည်းအရောင်းပေါ်ပေါက် 19 / 03 / 2013 မော်တော်ကားအရောင်းထဲမှာİETTသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမေ့လျော့ကုန်စည်အစ္စတန်ဘူလ်လမ်းရထား, မက်ထရိုအတွက်ဘတ်စ်ကားအကြားပေါ်ပေါက်, ဘတ်စ်ကားဟာမေ့လျော့ခြင်းနှင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကားတစ်စီးကုန်ပစ္စည်းများ 26 မတ်လ 2013 အတွက်အင်္ဂါနေ့ပြည်သူ့လေလံနည်းလမ်းဖြင့်ရောင်းချလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖို့လက်လှမ်းရပ်နှင့်မ။ လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာ, ကင်မရာ, မိုဘိုင်းဖုန်းအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောသံ, မော်တော်ကားလိုင်စင်ပန်းကန်အဖြစ်အီလက်ထရောနစ်ကုန်စည်များအကြားဆုံးရှုံးသွားသောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုရာပေါင်းများစွာ, မတ်မတ်အမျိုးမျိုးအာရုံစိုက်ထားပါတယ်။ လေလံပွဲအဆောက်အဦးနှင့်အတူအင်္ဂါနေ့, မတ်လ 26 09.00 12.00 နာရီနံနကျအခြိနျအပေါ်ကျင်းပလိုသူİETTဘတ်စ်ကားနှင့်ပေါ်လာတာဟာအရင်, မြေအောက်ရထား, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်ကားထဲတွင်မေ့လျော့ခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ Expired ဖြင့်ခေတ္တစောင့်ရှောက်လျှင်, Karakoy ဘူတာရုံနိုင်ငံသားများ ...
အတ္တစီမံခန့်ခွဲမှု, ဘတ်စ်ကား, Metro နှင့် Ankaray ဟာမေ့လျော့ပစ္စည်းများကိုပြပွဲများခဲ့ကြသည် 03 / 06 / 2013 အတ္တစီမံခန့်ခွဲမှု, ဘတ်စ်ကား, Metro နှင့် Ankaray ဟာမေ့လျော့ပစ္စည်းများကိုပြပွဲများခဲ့ကြသည်: တူရကီအတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မေ့နေတာလား, သည် "မရှိတော့" dedirtti ကြည့်ပါ။ မေ့လျော့ပစ္စည်းများစာအုပ်များ, ပိုက်ဆံအိတ်, နာရီ, မျက်မှန်, လက်ပ်တော့, ဒါမှမဟုတ်ပင်တုအံကပ်ပင် chandeliers များမှာပါဝင်သည်။ အံ့သြစရာပြပွဲတူရကီအတ္တ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုမှာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုရုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့သူအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုထွက်တင်ဆောင်လာသောအတွက်တုန်လှုပ်စေသောဖြစ်ကြသည်။ အတ္တစီမံခန့်ခွဲမှု, ဘတ်စ်ကား, Ankaray အတွက်ပြသမက်ထရိုနှင့်မေ့လျော့တ္ထု။ ဘတ်စ်ကားဗဟိုအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်မေ့လျော့ဥစ္စာမှဆောင်ခဲ့ကြ၏။ ထိုအခါက website တွင်ထုတ်ဝေသောခေါ်ဆိုသူ၏ sahiplerine မှပြန်လာသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမေ့လျော့ကြားတွင်ဒါရှိတယ်, သင်ဆိုသညျကားသော "မရှိတော့" ဟုအဆိုပါမျိုး ... Chandelier မြင်သူတို့ကို denture ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဝတ်အစားများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ကုန်ခြင်း (တူရကီက Metro နှင့် Ankaray စီးပွားရေးလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းရေးရာများအတွက်) ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် 13 / 08 / 2013 အဝတ်အစားများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ကုန်အဝတ်အစားများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ကုန်ဘို့ရထားလမ်းစနစ်ဌာနတူရကီက Metro နှင့် Ankaray စီးပွားရေးလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းရေးရာ၏အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဝယ်ယူပါလိမ့်မည်စားသုံးမှု 4734 အမှတ်ကပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 86491 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်နီးချင်းပြိုင်ကားကွင်းရိပ်သာလမ်း Blok အဘယ်သူမျှမ:506330 YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3125071087 - 3125071330 ဂ) e-mail လိပ်စာ : နုစာရွက်စာတမ်း၏ ali.altuner@ego.gov.t CA) အင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဝတ်အစားများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (တူရကီက Metro စီးပွားရေးလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများအတွက်) ပစ္စည်းများဝယ်ယူပါလိမ့်မည် 11 / 02 / 2014 အဝတ်အထည်ပစ္စည်းများအဝတ်အထည်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပစ္စည်းပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဧည့်ခံဘို့ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရထားလမ်းစနစ်ဌာနတူရကီက Metro စီးပွားရေးလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းရေးရာ၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းပစ္စည်းများအတ္တအထွေထွေဒါရိုက်တာပါလိမ့်မည် 4734 အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 8644 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်နီးချင်းပြိုင်ကားကွင်းရိပ်သာလမ်း Blok အဘယ်သူမျှမ:506330 ။ YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3125071087 - 3125071330 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ali.altuner@ego.gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ် ...
မြို့သူမြို့သားကဒ်ကြေညာချက် KoCaeLi ဆုံးရှုံးခဲ့ရ
အစ္စတန်ဘူလ်ဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်
Inc ကိုulaşımpark နိုင်ငံသားများဟက်ကမ္ဘာ့ဖလားအတူသဘောတူညီမှုရ 250
Kadikoy-Kartal မက်ထရိုဖွင့်ပွဲ၏ 19 ။ နိုင်ငံသားများနေ့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါသည်
Gebze အစ္စတန်ဘူလ်ulaşımparkထံမှလွယ်ကူစွာ Access ကိုမှလျှို့ဝှက်ချက်
Mass သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထံမှ IETT မေ့လျော့ပစ္စည်းအရောင်းပေါ်ပေါက်
အတ္တစီမံခန့်ခွဲမှု, ဘတ်စ်ကား, Metro နှင့် Ankaray ဟာမေ့လျော့ပစ္စည်းများကိုပြပွဲများခဲ့ကြသည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဝတ်အစားများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ကုန်ခြင်း (တူရကီက Metro နှင့် Ankaray စီးပွားရေးလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းရေးရာများအတွက်) ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဝတ်အစားများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (တူရကီက Metro စီးပွားရေးလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများအတွက်) ပစ္စည်းများဝယ်ယူပါလိမ့်မည်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (285) ဇူလိုင်လ 2019 (636) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (619) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (518) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (665) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (831) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)